Iimpembelelo kunye neNkolo kwiiNkqubela
Nangona amalungu enkolo ebonakala ehlupheka kwizandla zamaKristu amnandi kuwo wonke ama-Middle Ages, akufanele libaleke ukuba amanye amaKristu ahlupheka. Ukuxhaswa kuka-Augustine ukunyanzelisa ukungena ecaweni kwakusetyenziswa ngenzondelelo xa iinkokeli zecawa zithetha ngamaKristu ayenomdla wokulandela indlela eyahlukeneyo yonqulo.
Oku kwakungekho ngaso sonke isikhathi - kwithuba lokuqala lewaka leminyaka, ukufa kwakuyisicala esinqabileyo.
Kodwa kwi-1200s, kungekudala emva kokuqala kwemikhosi ekumelene namaSulumane, iimbambano zaseYurophu ezichasene namaKristu aphikisana nazo zenziwa.
Amaxhoba okuqala ayengama- Albigenses , ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yiCathari, ayenziwa ikakhulukazi kumazantsi eFransi. Laba bantu abahluphekileyo bazama ukungabaza ibali leBhayibhile lokudala, babecinga ukuba uYesu ingelosi esikhundleni sikaThixo, bawunqabile ukuguquguquka, kwaye bafuna ukunyaniseka. Imbali ifundise ukuba amaqela enkolo aqhele ukufa ngokukhawuleza okanye kamva, kodwa iinkokeli zecawa zangoku zazingakhathazeki ukulinda. I-Cathari nayo ithatha isinyathelo esiyingozi sokuguqulela iBhayibhile ngolwimi oluqhelekileyo lwabantu, oluye lwasebenza kuphela ukunyusa iinkokeli zonqulo.
Ngo-1208, uPapa Innocent III wakhulisa umkhosi wama-knights angama-20,000 kunye nabalimi abafuna ukubulala nokuphanga iFrance. Xa isixeko saseBeziers sifikela kwimikhosi yeNgqobhoko eyayingqonge, amajoni acela umgca wamaphepha uPalnald Amalric ukuba axelele abathembekileyo ngaphandle kwabangakholwayo .
Wathetha amagama akhe adumile: "Bulale bonke, uThixo uyazi yena ngokwakhe." Ukunyaniseka okunjalo kunye nenzondo kuyayethusa, kodwa kunokwenzeka kuphela kumxholo wenkolo yonqulo olusisigxina kwabangakholwayo kunye nomvuzo ongunaphakade kumakholwa.
Abalandeli bakaPeter Waldo waseLyon, ababizwa ngokuba ngama-Waldensian, nabo bavutha umsindo wengqobhoko yeNgqobhoko.
Bakhuthaza indima yabashumayeli bezitrato ngaphandle kokuba umgaqo-nkqubo osemthethweni owamisela kuphela abaphathiswa ukuba bashumayele. Bayeka izinto ezifana nezifungo, imfazwe, imilingo, ukuhlonishwa kweengcwele , izibambiso, i-purgatory, kunye nokunye okuninzi okukhuthazwa yienkokeli zonqulo .
Ibandla lalifuneka ukulawula uhlobo lwolwazi abantu abava, hleze bonakaliswe yisilingo sokuzicingela. Baye batyholi beBhunga le-Verona ngo-1184 baza baxhwala baza bafa phakathi nekhosi elandelayo i-500. Ngo-1487, uPapa Innocent VIII wabiza i-crusade exhobileyo malunga nabantu base-Waldensian eFransi. Ezinye zazo zibonakala ziphila kwiAlps nasePiedmont.
Ezinye iindidi zamacandelo zaye zahlulwa yinto efanayo - ukugwetywa, ukuxothwa, ukunyanzeliswa nokugqibela ekufeni. AmaKristu akazange adideke ekubulaleni i-breedom yabo yenkolo xa kwavela ukungafani kwezinto ezahlukahlukeneyo zezobukholo. Kwabo, mhlawumbi akukho nto yohlukwano yayincinci - yonke imfundiso yayiyinxalenye yeNdlela Yokwenene eya ezulwini, kwaye ukuphambuka kunoma yiphi na inqaku elijongene negunya lecawa kunye noluntu. Kwakungumntu onqabile oye wazama ukuma kwaye enze izigqibo ezizimeleyo malunga nenkolelo yenkolo, wenza konke okungaqhathaniswa nento yokuba babulawa ngokukhawuleza.
Ininzi imbali yeenkqubela zeNkqubela idla ngokugxila kwi-Crusaders ngokwabo kunye neembono zamaKristu aseYurophu afuna ukunqotshwa nokuphangwa kwiLizwe elingcwele. Kodwa kuthekani malunga namaSulumane amazwe abo afikeleleke kwaye imizi ixakwe? Baye bacinga ntoni ngale mikhosi yonqulo ephuma eYurophu?
Ukunyaniseka, abazange bazi nokuba kukho into ekufuneka ixhalabele ekuqaleni. Iimfazwe zeNkqubela kungenzeka ukuba zenze into enomdla kakhulu ekhaya, kodwa kwakungekho kude kube ngamaxesha anamhlanje ama-Arabhu aphuhlisa i-term for the phenomenon: al-Hurub al-Salibiya, "iMfazwe yoMnqamlezo." Xa imikhosi yokuqala yaseYurophu ibetha iSiriya, amaSulumane apho ayecinga ukuba ngoku ukuhlaselwa kwavela eByzantine kwaye kuthiwa ngabahlaseli bakaRum, okanye amaRoma.
Ekugqibeleni baqonda ukuba bajamelene neentshaba ezitsha, kodwa abazange baqaphele ukuba bahlaselwa yimikhosi ehlangeneyo yaseYurophu. Abalawuli baseFransi kunye namaqhawe aseFransi babejonge phambili kwimfazwe kwiNkqantosi yokuQala , ngoko amaSulumane kuloo mmandla athetha kuphela kwi-Crusaders njengo-Franks kungakhathaliseki ukuba yintoni ubuzwe bawo boqobo. Ngokubhekiselele kumaSulumane, oku kwakungomnye isigaba kwiimpiriyali zaseFrank ezazibonela eSpain, eMntla Afrika naseSicily.
Kwakungenjalo, emva kokuba emva kokuzaliswa kwezikumkani ezingapheliyo kwiLizwe elingcwele kunye neenkxaso eziqhelekileyo ezivela eYurophu zaqala ukufika ukuba iinkokeli zamaSilamsi zaqala ukuqonda ukuba oku kwakungekho iRoma kwakhona okanye impiriyali yaseFranky. Hayi, babejongene nesimo esitsha ngokupheleleyo kwiimeko zabo neNgqobhoko-enye eyayifuna impendulo entsha.
Le mpendulo yayiyizame zokudala ubumbano obuninzi kunye nenjongo efanayo phakathi kwamaSulumane afana nawo abaye bafumana ngexesha lokuqala kwandisa kwabo.
Njengoko ama-Yurophu ayenokuwunqoba ngokubhekiselele kwimilinganiselo ephakamileyo kunye nenjongo yezenkolo eziqhelekileyo, amaSulumane ayenako ukubuyisela ngokukhawuleza xa ayeka ukuxabana phakathi kwabo. Inkokheli yokuqala ukuqala le nkqubo yayinguNir al-Din, kunye nomceli wakhe, uSalah al-Din (Saladin), ukhunjulwa namhlanje ngabo baseYurophu nabamaSulumane bobuchule bakhe bezempi kunye nesimo sakhe esinamandla.
Nangona iinzame zeenkokheli ezifana nalezi, ininzi amaSilamsi ahlala ehlulwe kwaye, ngamanye amaxesha, awanandaba nentsingiselo yaseYurophu. Ngamanye amaxesha inzondelelo yenkolo yabanjwa kwaye yaphefumlela abantu ukuba bathathe inxaxheba kwiiphulozo ezichasene namaKreseli, kodwa ixesha elininzi abantu abangazange bahlala ngeenxa zonke kwiLizwe elingcwele babengazange bakhathazeke ngabo - kunye nabo bezinye amaxesha basayina izivumelwano kunye neenkokheli ze-Crusader bukumkani bamaSilamsi. Njengoko zingenakulungelelaniswa, njengoko kunjalo, amaYurophu ayedla kakhulu.
Ekugqibeleni, abaMnqophiso abazange bashiye igalelo elikhulu. Ubugcisa bamaSilamsi, ubugcisa kunye nooncwadi alunakufunyanwa ngokubanzi kunye namaKristu aseYurophu. AmaSulumane awazange abe nomuvo wokuba banento eninzi ukuba bafunde kumabhabari abavela ngasenyakatho, ngoko kwakungumfundi ongenqabile ukuba athathe ixesha lokufumanisa oko amaKristu acinga okanye akwenzayo.
Kwakukho uluntu lwamaYuda, ininzi enkulu, kulo lonke elaseYurophu nakuMbindi Mpuma ngaphambi kweMpi yamaKatolika. Bazinzile kwaye baphila ngexesha leminyaka emininzi, kodwa nabo banikezela iithagethi ezilingayo zabaphangi Abahlaseli bafuna i-infidels ukuba bahlasele kwaye baxabise ukuphanga. Kuthathwe phakathi kweenkolo ezimbini ezilwa, amaYuda ayesesimo esingapheliyo.
UbuKristu bokungahloneli ubuKristu babonakala bukhona ngaphambi kweNkqubela yamaKatolika, kodwa ubudlelwane obubi phakathi kwamaSulumane kunye namaKristu bakwenza nzima kakhulu into eyayisele ixakeke.
Ngo-1009 uChaliph Al-Hakim bi-Amr Allah, isithandathu seFatimid Caliph eYiputa waza kamva umsunguli wehlelo leDruze, wayala iSaul Sepulcher kunye nazo zonke izakhiwo zobuKristu eYerusalem . Ngo-1012 wayala zonke izindlu zobuKristu nezamaYuda zonqulo.
Omnye wayecinga ukuba oku bekuya kuba nobudlelwane obubi phakathi kwamaSulumane kunye namaKristu, nangona i-Amr Allah yayicatshangelwa ukuba iyingozi kwaye amaSulumane ancedisa kakhulu ekwakhiweni kwe-Holy Sepulcher kamva. Ngesizathu esithile, nangona kunjalo, amaYuda ayekwaso ngenxa yeziganeko.
EYurophu i-rumor yahlakulela ukuba "iNkosana yaseBhabheli" yayilawule ukutshabalaliswa kweSanta Sepulcher ekuhlaselweni kwamaYuda. Amaxhoba kumaYuda asezidolophini ezinjengeRouen, iOrelans, kunye ne-Mainz yaqhubeka kwaye la mahemuhemu ancedisa ukubeka isiseko sokubulala amaYuda athatywayo ngabahlali beNkqantosi beya kwiLizwe elingcwele.
Omnye akufanele alahlekiswe ekucingeni ukuba yonke iNgqobhoko ibumbene elubudlobongeni kumaYuda - akunjalo ngokwenene ukuba iinkokeli zebandla zazimanyene.
Kukho, kunoko, iindidi ezahlukeneyo zengqondo. Abanye babethiyile amaYuda; babona njengabagxeki, kwaye baphetha ukuba ekubeni behamba beza kubulala abanye abangathembeki, kutheni ungaqali ukuqala ngabanye bendawo. Kodwa ke, abanye babenqwenela ukuba amaYuda angabi nzakalo kwaye afune ukuwakhusela.
Eli qela lokugqibela lalibandakanya abantu abaninzi becawa.
Abambalwa baphumelele ekukhuseleni amaYuda asekuhlaleni kwiintlanzi zeNkqantosi kwaye bakwazi ukucela uncedo lweentsapho zendawo ukuba zifihle. Abanye baqala ukuzama ukunceda kodwa bazinikezela kwii-mobs hleze babulawe. Umbhishobhi omkhulu wase-Mainz utshintshe ingqondo encinane kakhulu kwaye wayebalekele esixekweni ukuze asindise ubomi bakhe - kodwa ubuncinane amawaka amaYuda awazange anenhlanhla.
Enyanisweni, ubuKristu babeneminyaka eyikhulu becala ukukhuthaza imifanekiso engcolileyo kunye neengcinga malunga namaYuda - akunjalo nje ukuba le nxamnye nobuYuda yaphuma ngaphandle kwayo, iphuma ngokusuka kwiinkemba ze-Crusaders. Ngaloo ndlela, nokuba kuqwalaselwa ngesikhundla apho ababingeleli nababhishophu bafumana khona kufuneka bagqibe ekubeni bazisile. Ngezenzo okanye ukungasebenzi, icawa yakhuthaza ukuphatha amaYuda njengabemi beesibini, kwaye oku kwabangela ukuba lula ukuba baphathe ngokungaphantsi komntu ekupheleni.
Akukho ndlela yokuxelela ukuba mangaphi amaYuda afela eYurophu naseMhlabeni oyiNgcwele kwizandla zamaKreki aKrestu, kodwa amanqaku amaninzi abeka amanani emashumi amabini amawaka. Ngamanye amaxesha bazinikezelwa ukubhaptizwa kuqala (ukuguquka okanye ikrele ngumfanekiso oqhelekileyo ngokubhekiselele kwiintshaba zamaSilamsi, kodwa amaKristu akwenzile ngokunjalo), kodwa ngokuqhelekileyo babulawa ngokuthe ngqo.
Abanye abantu abambalwa bakhetha ukuzimisela iintlawulo zabo kunokulinda imfesane yabo yesisa yabamelwane babo abangamaKristu. Kwisenzo esibizwa ngokuba yi-kiddush ha-Shem, amadoda angamaYuda aya kuqala abulale abafazi babo nabantwana kwaye ngoko-ngokwawo - uhlobo lokuzifela ngokuzithandela ezandleni zabo. Ekugqibeleni amaYuda ayehlala eYurophu naseMiddle East awona mkhulu kakhulu olahlekileyo ukuphuma kwiiMpike zobuKrestu ezilwa ne-Islam.
Intsingiselo yeeNkqubela zezopolitiko kunye noluntu namhlanje alinakuqondwa nje ngokujonga ubundlobongela, ukutshutshiswa, okanye utshintsho lwezoqoqosho olwenziwa. Nangona kunjalo kubalulekile ukuba ezo zinto zakuba zixesha, intsingiselo yeeNkqubela zabantu namhlanje zizimisele ngokukodwa oko kwenzekayo njengokuba abantu bakholelwa ukuba kwenzeke kwaye amabali axoxana ngawo ngexesha elidlulileyo.
Imibutho yamaKristu kunye namaSilamsi iyaqhubeka ikhangele phambili kwiiNkqubela njengexesha apho amakholwa azinikeleyo aya ekulweni ukuze avikele ukholo lwawo. AmaSulumane abonwa njengabaxhasi benkolo exhomekeke ekusebenziseni amandla kunye nogonyamelo ukusazisa, kwaye namhlanje iTurks ibonwa ngolu lwazi lwengozi yama-Ottomans eYurophu. AmaKristu abonakala njengabakhuseli bobabini benkolo kunye ne-imperialism, kwaye ngoko nayiphi na intsingiselo engasentshona eMbindi-Mpuma ibonwa nje ngokuqhubekwa komoya wokudibanisa.
Ukuba amaSulumane ayemele akhathazeke kuphela ngempikiswano abaye balahleka, babeya kujonga kwi-irekhodi ye-colonialism yaseYurophu kulo lonke elaseMbindi Mpuma. Kukho into eninzi apho ukukhononda malunga kwaye kukho iingxoxo ezilungileyo ukuba iingxaki namhlanje ziyingxenye yelifa lemimandla ye-Europe kunye nemikhwa.
Ukoloniyali yaseYurophu yaguqula ngokupheleleyo ilifa lolawulo lokuzilawula kunye nokuwunqoba okwaye kwavela kwixesha likaMuhammad.
Esikhundleni sokuba lilingana, ukuba lingekho phezulu, lamaKristu aseNtshona, alawulwa kwaye alawulwa yi-Christian West. Oku kwakunzima kakhulu kumaSulumane ngokuzimela nokuzimela, ukubetha abaqhubekayo ukuhlangabezana nazo.
I-colonialism ayikho yedwa, kodwa, njengento ekujoliswe kuyo yintliziyo yamaSulumane - i-Crusades iphathwa njengeparadigm yobudlelwane phakathi kwe-Islam kunye nobuKristu.
I-colonialism yaseYurophu isoloko iphathwa njengento ehlukileyo ukusuka kwiiNkqubela kodwa kunoko ukuqhubeka kwabo kwifom entsha - njengokuba kudalwa ilizwe likaSirayeli.
Ngenye indlela umntu angaqonda ngayo ukuba namhlanje iiNtshontshi zisetyenziselwa ukulila phakathi kwamaSulumane eMiddle East? Naluphina ubuncwane okanye uxinzelelo okwangoku olwenzeka ngamaSulumane luboniswa nje ngokuqhubeka nokuhlaselwa kwangaphambili ekuhlaleni ummandla. Kuyinto enomdla ukuba oku kuya kuba kunjalo kuba, emva koko, i-Crusades yayinokuhluleka okuphawulekayo. Umhlaba owawunqobile wawungancinci kwaye awugcinwanga ixesha elide, kwaye ukuphela kweentlungu ezihlala phantsi kwakuyi-peninsula yase-Iberia, ummandla waseYurophu nakumKristu.
Namhlanje, i-Crusades iyaqhubeka ibe yinkinga enzima njengokuba amaSilamsi alahlekile, kwaye ngamanye amaxesha iingxaki zangoku zibangelwa yimiphumo yezoMkhosi. Nangona kunjalo amaSulumane awazange aphumelele kwixesha elide elivela kwiiNkqubela, kwaye ngokwenene amaMuslim avuselela ukumbamba iKonstantinople aze aqhubele phambili eYurophu kunokuba amaKristu atshintshele eMiddle East. Iimfazwe zamaKatolika azizange nje ziyinkokeli yamaMuslim kodwa, ngokugqithiseleyo kwexesha, yabonisa ubungangamsha bamaSilamsi ngokweendlela zobuqili, iinombolo, kunye nokukwazi ukudibanisa nokusongela kwangaphandle.
Nangona i-Crusades ngokuqhelekileyo ijwayele ukujongwa ngolu lwazi lokuhlazeka, enye indawo eqaqambileyo kwimeko yonke yinto engumfanekiso kaSaladin: umkhokeli wezempi odibeneyo owamanyanisa amaSulumane abe ngumkhosi olwabalaseleyo olwabakhokela abahlaseli abangamaKristu. Ngamhlanje amaSulumane aseArabhu ayamhlonela uSaladin athi enye i-Saladin iyadingeka ukulahla abahlaseli bamanje - kwaSirayeli. AmaYuda namhlanje athathwa ngabaninzi njengabanquli bamaNtshontsho, iYurophu okanye inzala yabantu baseYurophu abanamalungelo amaninzi afana nelizwe laseYurophu. Kuthemba ukuba "ubukumkani" babo buza kupheliswa ngokukhawuleza.
Xa ekhuthaza imfazwe ngokulwa nobugandlo, uMongameli uGeorge W. Bush ekuqaleni wayechaze ngokuthi "intambo," into enyanzelekile ukuba ahambe nayo ngokukhawuleza ngenxa yokuba yayisomeleza amaSulumane ukuba "imfazwe yobundlobongela" yayisigxina nje entsha yeNtshona "imfazwe yamaSilamsi." Nawuphi na umzamo ngamagunya asentshona ukuphazamisa imicimbi ye-Arabhu okanye yamaSilamsi iboniswa ngama-lens amabili ama-Crusades yamaKristu kunye ne-European colonialism.
Oko, ngaphezu kwayo nayiphi na into, ifa lexesha leMfazwe kunye nelo liza kuqhubeka lugxininisa ubudlelwane phakathi kwe-Islam kunye nobuKristu ixesha elide elizayo.
Amangcwaba aHununted kunye namaGumbi aMoya
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Wyoming
UGeorge de Landa (1524-1579), uBhishophu kunye no-Inquisitor of Early Colonial Yucatan
Umvuzo kwiR2-D2: KwiMemori kaTony Dyson
Yintoni efanelekileyo ye-TOEIC Ukuthetha nokubhala?
Yintoni enokuyilindela kwi-LDS (i-Mormon) amaziko okuqeqesha abathunywa bevangeli
Izipho eziPhezulu zeGitaritri
Cómo hacer ukuba afune ukuvavanya ukuvavanya nge-discapacidad
Kutheni ifilosofi ibalulekile
Ukufumana Imithombo Engathembekiyo
Ukuhlaziya nokuCoca izihlalo zeSiko
Ukusebenzisa iiNkcazo emva kweeVerbs Conjugated